Konke malunga neekayithi -Ikkaro
yokuqalisa >> Kites
Amanqaku, iividiyo, amakhonkco kunye nezixhobo kwiindidi ezahlukeneyo zeekayithi kunye nokusetyenziswa kwazo.
I-Static, acrobatic, traction, KAP, njl njl
Nangona imvelaphi yabo ingaqinisekanga, ii-comets kufuneka ukuba zazalelwa e-China ngaphezulu kweminyaka engama-2.500 XNUMX eyadlulayo. Kukho amabali aliqela malunga nemvelaphi yawo: umnqwazi woqalo womfama oqhutywa ngumoya, iseyile yenqanawa okanye mhlawumbi umsebenzi wesithandi sobulumko uMo Ti, owakha ikhayithi ekwimo yentaka ebhabha iintsuku ezintathu njengeentaka
Inyani yile yokuba iikhayithi ezibhabhayo yayisisenzo sokucamngca kumaTshayina. Kodwa, ukongeza koku kuzonwabisa okanye ukusetyenziswa kwezenkolo, zazisetyenziswa iikayiti -nanjengoko bebeya kwenza nasePolynesia kwiminyaka eyadlulayo- njengezixhobo zokuloba, bebopha umlobothi ngesithiyelo kwikayiti eyathi kamva yakhutshwa emkhombeni, ilumkile ukuyibeka isixhobo kumgama owaneleyo ukusuka kwisithunzi esenziwe sisikhephe ukukhohlisa iintlanzi.
AmaTshayina afumene nezicelo zomkhosi kule nto, ezinokuthi zivele ekutyikityweni kwebala ledabi, ukulinganisa umgama ukuya kwinkampu engqingiweyo, kwaye, nakwezinye iincwadi kuthiwa bekukho amadoda abhabha kwezi zinto kwizixeko ezingqingiweyo.
Ikayiti iphuma e-China kuyo yonke indawo eneempembelelo; ke, ibonakala kumazwe akumazantsi mpuma eAsia anjengeKorea, iMalay Archipelago, iIndonesia neBurma, kunye naseJapan naseIndiya. Akukaziwa ukuba olu lwandiso lwenzeka nini, kodwa ukuba kungenzeka ukuba lwenzeke ngexesha elifutshane, njengoko ikayiti kungekudala iqala ukusasazeka kuyo yonke iPolynesia, yaziwa njengempuma njenge-Easter Island. Ngokufanayo, ngeIndiya, inabela entshona kwiPeninsula yaseArabia nakuMntla Afrika.
EYurophu ikhayithi yayisaziwa ngaphambi kwenkulungwane ye-XNUMX ngeendlela ezintathu: uhlaselo lweMongol, iindlela zorhwebo ngeCape of Good Hope kunye nonxibelelwano nelizwe lama-Arab. Imbali yaseYurophu yekayiti iqala ngezinto ekuthiwa ziiDracos okanye izilo ezinjengeenjoka ezazisetyenziswa njengeebhanile kwimihla yokugqibela yoBukhosi baseRoma. Ezi zinto zazinesilinda esine-cylindrical, enemilomo ebanzi ebonakala njengenamba okanye esinye isilwanyana esithandekayo kwaye sasinxitywa sibotshelelwe ngaphezulu kwepali. Njengoko yayigcwalisa umoya yadumba, yabetha umoya phezu kwamahashe emfazweni. Injongo yayo yayikukwenza uloyiko kutshaba emfazweni kwaye lusebenze njengesacholo somqala okanye ipenisi evumela abatoli ukuba bazi kwicala lomoya.
Kwasekuqaleni kwenkulungwane ye-1405, inkcazo eneenkcukacha yekite emile okwejoka iyavela kumaxwebhu ohlukeneyo elo xesha, anje ngencwadana kaConrad Kieser kwitekhnoloji yezomkhosi iBellefortis (1430) okanye kwincwadi ebhaliweyo ebhalwe ngo-1752 egcinwe eVienna. Kodwa kuphela ekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesixhenxe xa ikhayithi iya ithandwa kakhulu kuyo yonke iYurophu, nangona inikwe umda ebantwaneni, njengemidlalo yokuzonwabisa okanye kwimiboniso ye-pyrotechnic. Ubuchule bayo benzululwazi abuzange buqatshelwe de kwaba yinkulungwane yeshumi elinesibhozo, ngaphandle kolingelo olungenamaphepha olwenziwe nguIsaac Newton kwimimandla yejiyometri yeemilo zekayiti. Esinye isazinzulu esasilinga ii-comets yayinguBenjamin Franklin owathi ngemini yoqhwithela ngoJuni XNUMX, wenza iimvavanyo ngombane. Xa waphakamisa "ikhayithi yombane" edumileyo esibhakabhakeni ngesitshixo esiqhotyoshelwe kumtya, wafumanisa ukuba kukhutshwa umbane, owamvumela ukuba abonise uhlobo lombane kwaye emva koko ayile umbane.
Ngaphandle kwezi zinto zandulelayo, iikayiti zazingasetyenziswa rhoqo ukuphakamisa izixhobo ekuqwalaselweni kwemozulu kude kube yinkulungwane ye-1891. Ukuyilwa kukaWilliam A. Eddy (1894) kunye noL. Hargrave (XNUMX) kususela kweli xesha, okwakhokelela kuguquko ekusebenziseni kwabo kufundo lomoya. Eyokuqala yenza ikhayiti yesiqhelo kunye nomtya ojikelezisiweyo ukwenza i-dihedral angle, evumela ukuba ibhabhe ngaphandle komsila; Ikayiti yesibini yayiyimilo emacala mathathu equka iibhokisi ezimbini ezidityaniswe enye nenye neziphelo ezivulekileyo.
Ngasekupheleni kwenkulungwane ye-1903 nasekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, kungqamana nophuhliso lokuhamba ngenqwelomoya, iinkqubo zayilwa ngeenjongo zomkhosi ukuphakamisa ababukeli kwibala lemfazwe. Oku kubandakanya oololiwe beekayiti ezinkulu apho kwakuxhonywa khona ibhasikithi, ukusuka kwikayiti okanye kwintambo yayo, ukulungiselela umbukeli. Babephumelele ngaphezulu okanye ngaphantsi, kodwa ekugqibeleni iibhaluni zazisebenza kakuhle. Inkqubo enamathuba amaninzi, yamkelwe nangumkhosi wamanzi waseBritane kunye nomkhosi, yayiyeyona yayisebenzisa ikayiti eyayenziwe nguvulindlela wezokuhamba ngenqwelomoya uSamuel Franklin Cody (XNUMX), eyayineeseli ezimbini zeHargrave eziqhotyoshelweyo kunye amaphiko emboxo.
Kwiminyaka elishumi yokuqala yekhulu lama-1907, u-Alexander Graham Bell wazama iikiti zokwenza umatshini ophaphazelayo onokuthi ulawulwe. Wakha ii-comets ezinkulu ezenziwa linani elikhulu leeseli zeetetrahedral. Ngomnyaka we-3.393 wakha enye yeeseli ezingama-50 ezathi zatsalwa nge-steamboat, zaphakama ngamamitha angama-1909 ngaphezu komhlaba. Olunye ulwakhiwo olukhulu lweetetrahedral, luxhotyiswe ngenjini, alunikanga siphumo sinqwenelekayo, ke ngo-XNUMX, wakhetha ukuzinikela kweminye imisebenzi.
Emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, injineli yaseMelika uFrancis Rogallo wavelisa ikayiti eyavula indlela eya kubume obutsha obaziwa ngokuba yi-semi-flexible, obubonakala ngokufumana ubume bayo ngokudibanisa isenzo somoya kunye nenkqubo yee-flanges ezintandathu. I-NASA yaba nomdla kwimbono kaRogallo, awayecebe ukuyisebenzisa njengeparachute ekubuyiseleni kwakhona ii-capsule zesithuba. Izinto zokuxhoma ezixhonyiweyo kunye neekiti zemigca emibini ziziphumo ezibini kolu phando.
Ngo-1963, u-American Domina C. Jalbert waphefumlelwa liphiko lenqwelo-moya yakhe ukuba ayile ikayiti eguqukayo (parafoil) enazo zonke izibonelelo zemigaqo ye-aerodynamic yamaphiko angqingqwa, kuba ikhayithi yayingadingi ntonga, kwaye iphumelele ukumila kunye nokuqina kwendiza ngokusebenzisa iingxowa zangaphakathi ezinyuse umoya, eyathi yanika imilo yephiko yozinzo olukhulu kunye namandla amakhulu okuphakamisa.
Kule mihla ukubonakala kweekiti ezimbini, ezintathu kunye nezine zocingo ezitshisiweyo kunye neekiti zokutsala ziyenze yathandwa, njengomdlalo kwaye kumnandi.
Uyenza njani i-prismatic kite eyenziwe ekhaya
Ukuba ufuna iprojekthi oza kuyenza kule mpelaveki. Sifumene olu luhlu lweevidiyo ezi-5 ezithi Bacacisa inyathelo ngenyathelo ngenyathelo ngendlela yokwenza ikayiti "prismatic"
Yikhithi yeprismatic enesiseko esingunxantathu, kwaye kulwakhiwo lwayo siya kusebenzisa imicu yesakhiwo kunye nephepha leethishu.
Siqala nge izinto ezifunekayo ukwenza ikayiti.
Uyenza njani ikhayiti yeplastiki
I-Ista isondele kwaye njengesiko bonke abantwana, kwaye kungenjalo abantwana baya kufuna ukubhabha enye ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani ikayiti yendabuko eyenziwe ekhaya
Iveki eNgcwele idlulile, ixesha apho ikayiti yindlovukazi engenakuphikiswa nalapho ootatomkhulu bayayinyamekela ... Qhubeka nokufunda
Siza kubonisa ukuba njani yakha iphepha elilula lekayiti, zilungele ukuba zenziwe ngabancinci, nokuba kusekhaya okanye kwindawo yokusebenzela.
Ku malunga ne ikayiti yenyosi yenziwe ngu UmNayile Velez
Ikayiti liphepha elingu-A3 eliphindwe kabini, elidityaniswe ngentambo kwaye umsonto wokuthunga uqhotyoshelwe kwaye ukulungele ukubhabha.
Kungoko kufanelekile, ukuba namanqaku apho kukho ukutya kufuneka khona, banike amashiti abantwana ukuze bazobe umfanekiso kwaye xa begqibile ukuwudibanisa, bawudlale.
I-Decathlon Iphiko 185
Ukuba ufunda le nto ngokuqinisekileyo iya kuba kungenxa yokuba uyithengile. Uxolo. Uyenzile impazamo efanayo nam, kodwa ... Qhubeka nokufunda